Toerana filokana an-tserasera Slovenia - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(243 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Hatramin'ny volana Janoary 2017, ny tsenan'ny filokana any Slovenia dia iray amin'ireo fambolena indrindra amin'ireo firenena izay efa nisy an'i Iogoslavia. Araka ny lalànan'ny filokana, raha mbola tsy misy fizarana matanjaka ao Slovenia ny mpanao mofomamy sy loteria, dia hita manerana ny firenena ny trano fialamboly: avy amin'ny trano fisakafoanana manodidina ny sisintaniny mankany amin'ny faritra misy fizahan-tany.
Gambling amin'ny Internet ao Slovenia
Hatramin'ny volana janoary 2017, ny loteria filokana an-tserasera eto Slovenia dia ahitana loteria nasionaly Sloveniana. Misy koa vavahady Esteve miasa eo ambany fitarihan'ny loteria fanatanjahantena Sloveniana. Ny politikan'ny loharanom-pahalalana dia samy natao hanintonana ireo mpilalao ao an-toerana, saingy ny fidirana amin'ireo tranonkala vahiny an-tserasera dia eo amin'ny sehatry ny daholobe ihany koa nefa tsy misy famerana lehibe. Na izany aza, marihintsika ao amin'ny lahatahiry filokana amin'ny Internet, izay inoana, hiova izany toe-javatra izany tsy ho ela.
Ny site casino amin'ny aterineto dia manaiky mpilalao avy any Slovenia
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Slovenia, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa. Azonao atao koa ny mamaky ny hevitray momba ny tranokala an-tserasera, mba hahalalanao ny fampiroboroboana an-tserasera, bonus ary safidy fandoavam-bola tsara indrindra azon'ny mpilalao avy any Slovenia.
Slovenia - firenena kely antsasaky ny haben'ny faritra Moskoa, saingy miorina amin'ny toerana tena tsara. Eto ianao dia afaka mankafy ny hakanton'ny Alpes, ny toetra mahatalanjona an'ny ala sy ny morontsiraky ny Ranomasina Adriatika. Saingy ny olona filokana dia manana zavatra hatao eto amin'ity zoron'i Eropa ity, satria amin'ny trano filokana maro samihafa any Slovenia.
Slovenia - jeografia kely sy tantara. Amin'ny maha fanjakana miavaka azy hatramin'ny 1991;
Tsy mahazo alalana amin'ny fanjakana ny casinos amin'ny Internet.
Fahitana dimy an'i Ljubljana - renivohitr'i Slovenia, misy adiresy;
Toe-toerana ao Slovenia ary fohy ara-tantara fohy
Ny Repoblikan'i Slovenia dia eo afovoan'i Eropa. Mpifanolo-bodirindrina amin'ity firenena kely ity i Italia, Aotrisy, Hongria ary Kroasia. Ny renivohitra dia anarana poetika be - Ljubljana.
Tena miavaka ny Republic of location. Amin'ny faritra kely dia afaka mandeha manao ski ianao, mandehandeha eny amin'ny lemaka Alpine mahafinaritra fotsiny, midina amin'ny renirano an-tendrombohitra, mandeha mitsangatsangana amin'ny lava-bato maro ary mankafy ny riandrano, mitsangatsangana mankany amin'ny moron'ny Ranomasina Adriatika, na miala amin'ny mangina. ny ala virijina matevina. Betsaka ny toeram-pialan-tsasatra amin'ny lalana samy hafa be, ary fampivoarana lehibe ny sehatry ny filokana.
Ny tantaran'i Slovenia dia lava sy mikorontana, raha ny marina ny fanjakana dia niforona tamin'ny taona 1991 ary nekena tamin'ny taona 1992. Na izany aza, nipetraka tao amin'io faritra io ny olona talohan'ny androntsika. Ankehitriny dia manana mponina 2 tapitrisa mahery ny fanjakana. Ny endrika governemanta - repoblika parlemantera, ny filoham-pirenena no filoha, ankehitriny dia i Borut Pahzor. Andraikitra lehibe notanan'ny praiminisitra, amin'izao fotoana izao, Miroslav Tserar.
Slovenia dia ao amin'ny EU, ka ny vola ofisialy dia ny Euro. Ny faritany dia mizara ho 210 vondrom-piarahamonina sy tanàna 11.
Casinos sy filokana ao Slovenia
Avela hiloka any Slovenia, ary hita ao amin'ny tanàna maromaro ny filokana: Lipica, Portorož, Nova Gorica, Kranjska Gora. Ho fanampin'ny mponina eo an-toerana dia mankanesa aty manokana hilalao ny olom-pirenenan'ireo firenena mifanila aminy - Aostria sy Italia. Mazava ho azy, filokana - iray amin'ireo mpizahatany malaza indrindra.
Ny mampiavaka ny casino Slovenia dia ny tsy fahitana ny filalaovana vola be sy 100-200 euro. Fa be mpitsidika foana. Raha te-hilalao amin'ny tsatokazo avo ianao dia ilaina ny mampahafantatra amin'ny mpiasa ny trano filokana, amin'izay ianao dia asaina mankany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny VIP tsy miankina.
Ny toerana voalohany dia ny filokana dia ny Nova Gorica, trano filokana eto na dia mandamina fitsangatsanganana aza. Ao amin'ity tanàna ity dia misy 2 amin'ireo trano filokana lehibe indrindra any Slovenia: Perla Casino & Hotel, Park Casino & Hotel. Ahoana ao amin'ny trano filokana tsara indrindra eto an-tany, atitany mirenty eto, mpiasa tsy manelingelina, kilalao am-polony maro karazana, roulette, machine slot.
Ivon-toeran'ny asa filokana koa i Kranjska Hill. Misy ihany koa ny trano filokana malaza 2: Korona, Casino & Hotel Kranjska Gora. Manolotra tsy latsa-danja noho ny amin'ny casino an'i Nova Gorica.
Ny fialan-tsasatra any Portorož dia afaka mitondra ny tenanao amin'ny lalao karatra, milina filokana na roleta ihany koa, manana trano filokana 2 ny tanàna: Casino Portorož, Grand Casinò Portoroz. Lipica, ny vahiny dia tsy handeha tsy hahita filokana, mitsidika fotsiny ny Grand Casinò Lipica.
Mazava ho azy, ny mpitsidika dia afaka mankafy tsy ny lalao ihany, fa koa zava-pisotro mahery vaika. Matetika mihazakazaka ny programa fampisehoana ao amin'ny casino, noho izany ny escort izay tsy te hilalao dia ho zavatra hatao ihany koa.
Any Slovenia, mpitsidika kasino matotra, noho izany dia manavao hatrany ny slots. Ireo mpankafy lalao kilalao dia ho faly amin'ny karazany isan-karazany, tsy maintsy hanana blackjack sy poker, ity farany ity dia maro karazana no misolo tena azy: oasis poker, Texas Hold'em, 7 Card Stud Poker, Caribbean Poker, ary na Badugi aza. Ireo mpankafy an'i Punto Banco koa dia tsy tokony ho sosotra. Aza hadino ny miasa ao amin'ny efitrano malalaky ny roulette, matetika ny frantsay.
Toy ny any amin'ny firenena eropeana rehetra, ny casino miasa fehezin'ny fanjakana. Raha toa ka mifehy ny akanjo sy ny fetran'ny taona ny andrim-panjakana dia ampirisihina hianatra izy ireo alohan'ny hampiharana ilay fitsidihana.
Lalao amin'ny aterineto any Slovenia
Slovenia - ny firenena maoderina, koa eto dia milalao tsy amin'ny trano filokana tena izy, fa amin'ny virtoaly koa. Tamin'ny 2014, nisy lalàna vaovao mifehy ny hetsiky ny mpandraharaha, nametraka bokotra fanaraha-maso manokana, izay eo ambanin'ny Minisiteran'ny Vola.
Ny fandidiana casino an-tserasera dia azo itokisana, hatramin'ny nanombohan'ny asa dia takiana izy ireo hahazoana fahazoan-dàlana mandritra ny 5 taona. Ary raha te hahavita ilay fitsapana dia mijery lisitra maharary amin'ny fepetra takiana izy ireo. Noho izany, ny ahiahy sy ny famoahana vola dia aza manahy. Ho an'ny ahiahy lehibe indrindra Casino Luxury, Royal Panda Casino, Casino Slots rehetra, Betvictor Casino, Betway Casino ary maro hafa.
Tetezana Triple. Adiresy: Tromostovje, Ljubljana. Ity ensemble mahatalanjona ity, izay eo amin'ny tsangambaton'ny firenena, misy tetezana mpandeha an-tongotra 3, natsipy namakivaky ny reniranon'i Ljubljanica. Mandehana mamaky ny tetezana dia mety any amin'ny faritra taloha amin'ny tanàna, mikatona ho an'ny fifamoivoizana.
Valan-javaboary Tivoli. Adiresy: Tivoli Park, Ljubljana. Io no valan-javaboary lehibe indrindra eto an-drenivohitra, miparitaka any avaratra andrefan'ny afovoan-tany. Eo amin'ny faritry 500 hektara izay misy valan-javaboary mitafo mivantana Tivoli misy arboretum, dobo ary zaridaina, ilay havoana ary ilay havoana Rožnik Cone.
Katedraly St. Nicholas. Adiresy: Dolničarjeva ulica, 1, Ljubljana. Ity Katedraly Archdiocese of Ljubljana, natsangana ho fanomezam-boninahitra an'i Nicholas avy any Myra. Ny fananganana tsangambato nasionaly dia nanomboka tamin'ny 1361 ary tamin'ny taonjato faha-XVIII vao vita.
National Gallery of Slovenia. Adiresy: Puharjeva ulica 9 1000 Ljubljana. Ity no tranombakoka zavakanto lehibe any Slovenia, natsangana tamin'ny 1918. Tao no nanangonana fanangonana sary hosodoko mahatalanjona nanomboka tamin'ny Moyen Age.
National Museum of Slovenia. Adiresy: Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana. Ity tranombakoka tranainy indrindra amin'ny firenena ity dia nanangona zavatra hita arkeolojika maro, zavatra kanto haingo, sary, sary, vola madinika.
Zavatra mahaliana momba an'i Slovenia sy Sloveniana
Slovenianina - ny fiteny eropeana taloha, dia mbola mitazona ny isa roa.
Mipetraka aloha ny Sloveniana ary mandry aloha, aorian'ny ora 22, efa mipetraka ny firenena.
Any Ljubljana, dia velona ny 13% ny mponina.
Antsasaky ny faritany - ala, ary roa ampahatelony - tahiry.
I Slovenia no lava-bato be mpitsidika indrindra any Eropa - Postojna, ampahany amin'ireo tioneliny izay namorona gadra an'ady rosiana.
Any Lipica miaraka amina 1580 dia miasa ny toeram-pambolena, izay mamboly lipitsianov - soavaly tsy fahita firy, no nanolotra ny lapan'ny mpanjaka tany Eropa.
Slovenia - iray amin'ireo firenena an-dàlam-pandrosoana haingana indrindra any Eropa, misy ny index Human Development Index avo dia avo - 0.892, ary tsy mitsaha-mitombo.
Slovenia amin'ny sarintany Eoropa
0.1 Gambling amin'ny Internet ao Slovenia
0.2 Lisitry ny Top 10 Australian Online Casino Sites
2.1 Ny site casino amin'ny aterineto dia manaiky mpilalao avy any Slovenia
3.0.1 Toe-toerana ao Slovenia ary fohy ara-tantara fohy
3.1 Casinos sy filokana ao Slovenia
3.2 Lalao amin'ny aterineto any Slovenia
3.2.2 Zavatra mahaliana momba an'i Slovenia sy Sloveniana
3.2.3 Slovenia amin'ny sarintany Eoropa
tsy misy code code ruby ​​slot misy vola